Atụmatụ - Malaysia - Batu Caves - 1aviagem.com
Atụmatụ - Malaysia - Batu Caves
Edebere 30 November 2018 site Römulo Lucena
Ọfọn, na-eme ihe n'ememme Fraịde iji kwuo ntakịrị banyere Malaysia. Na-eche na mba a banyere "n'amaghị ama na edemede". Ugbua nke abụọ post na a blog banyere Malaysia. N'ihi na echere m na ọ bara uru. Taa, anyị na-aga nke abụọ nke Malaysia, na-agafere Batu Caves.
Enwere ike ịbata n'ọdụ ụgbọ oloko (KTM), na-ahapụ Kuala Lumpur. Ọ bụ 15 kilomita na bụ ọdụ ikpeazụ. Ọ na-ewe oge, mana ọ bara uru.
Mgbe ịkwusịrị ụra n'oge njem, ọ na-ewe oge, oge eruola ka ị na-emega ahụ.
Ịhapụ ọdụ ụgbọ ahụ, ị ​​ghaghị ịgafe onye nlekọta na-acha akwụkwọ ndụ. Ọ bụ chi Hindu Hanuman. Ọ bụ ihe mbụ ị ga-ahụ anya ((ị gaghị ahụ ihe oyiyi nke 15 mita n'ihu gị) atụla ụjọ na ị na-aga n'ụzọ ziri ezi.
Ugbu a na-abịa mmega ahụ, ị ​​maara na ọzụzụ mgbatị na-agwụ? Ee, ọ bụ oge iji jide. M na-ekwu nke a n'ihi na izute Batu Caves, ị ga-arịgo nzọụkwụ 272. Chee echiche banyere ezigbo steepụ maka mmega ahụ!
Mba, anaghị m agụta ihe ndị a ... echeworị na ị gụọ ma hapụ ụgwọ ahụ n'etiti ?! Ha na-akwalite ma dee ọnụ ọgụgụ nke nzọụkwụ ahụ n'akụkụ nke ọkwá ahụ. Ugbu a ị nwere ike ikpebi ma ị na-abịa ma ọ bụ na ị gaghị abịa. (I.e.
Onye nlekọta ọlaedo a bụ Murugan, n'eziokwu ọ bụ chi Hindu.
Mgbe ndị na-elekọta 2 na steepụ wetara. Ọ bụ oge ezumike ịnweta echiche ahụ.
Ekwenyere m na ebumnuche nke echiche a dịkwuo ọchịchọ karịa izu ike. Ọ pụtara na ị nọ na steepụ gaa n'eluigwe.
Otu ihe ị ga-eme ka ọ pụta ìhè bụ na ọnụ ụzọ nke ọgba ahụ bụ eziokwu, ya bụ, n'efu ... A ga-enwe ọtụtụ ndị na-ekwu na ịkwesịrị ịzụta ihe ịbanye. Ụgha, ị gaghị azụ. Ị nwere ike ịpụ n'ụgbọ okporo ígwè ma gaa ogologo ebe ahụ. N'ụzọ dị mwute, ndị na-ere akwụkwọ akụkọ agaghị echefu. Ma ọ bụrụ na ịzụta ihe ncheta nke ebe ahụ, ana m atụ aro ka ị mee ya na nloghachi. (nke a na-ezere ibu ibu).
N'adịghị ka ọtụtụ osisi ndị ọzọ, Batu Caves bụ obodo ukwu, nke nwere ọnụ ala dị ala na-agbapụta n'ọgba, na ọkụ ndị mmadụ na ọkụ. Nke ahụ bụ n'ezie oghere atọ ọnụ. Ọ bụ ebe dị egwu. Ihe owuwu ahụ bụ ihe okike. na ihe niile n'ọgba dị mma. Site na stalactites, mmiri, nnụnụ, ọkpụkpọ, spiders, enwe ...
Achọrọ? Ee, na ị kwesiri ịṅa ntị na ha, ha bụ ndị ohi na-achọ ịbịa zoo nri ehihie gị, obere akpa gị na ọbụna ekwentị gị. N'ezie, ọ bụ na ha na m hụrụ otu n'ime ihe ndị kachasị egwu na ndụ m. Otu onye na-ese onyinyo mmiri site na ọgba aghara n'ọgba mgbe enwere zuru oke akpa nwa nwanyi ma tie mkpu. Otu n'ime ndị na-ahụ maka ebe ahụ na-atụgharị otu wormhole n'ebe anụ ahụ nọ, bụ onye na-ama jijiji ma tụba akpa ahụ. Ma nwoke ahụ nke na-eji mmiri ara (dịka onye ọ bụla n'ime ọgba) wee tụọ egwu ma mebie mmiri ahụ n'ime ụlọ ahụ! O doro anya, olee mgbe ị ga-eche onye ọ bụla n'ime ọgba iji tụfuo agwọ? Lee otu echiche?! Ya mere, okwu mmechi bụ: anaghị ebugo mmiri n'ime ọgba.
Cheta Batu Caves bụ ebe nsọ dị iche iche, yabụ ọ bụrụ na ị gaa n'ugwu Hindu, ị ga-ewepụ akpụkpọ ụkwụ gị. N'ezie nke a bụ omenala na Eshia, wepụ akpụkpọ ụkwụ gị tupu ịbanye n'ụlọ ọ bụla.
Ọ bụ ezie na oghere 3 dị ihe dị ka awa abụọ ọ ga-ekwe omume iji mezue njem ahụ. Banyere akpụ na spiders, ha na-etinyekwu uche n'otu n'ime oghere atọ (Dark Cave). N'ime ọgba a, ị ga-akwụ ụgwọ ego ọnụ ụzọ. E nwekwara nnukwu ihe ịrịba ama na-agwa gị na site n'ebe ahụ i nwere ike ịchọta ha n'ụzọ. ọ dịghị mma ịgbanwuo ọkụ na-ekwu n'elu ụlọ, ma ọ bụ ị ga-agbapụ ọkpụkpọ ahụ. Ma ọ bụrụ na ị na-atụ egwu spiders, anaghị m atụ aro ịbịanye ... ha nọ n'ọgba ikpeazụ a, nke kachasị njọ, ọ bụ nanị onye ụlọ ahụ enweghị ìhè ma ọ bụ ìhè nke ụlọ nsọ.
Ọfọn, ma ọ bụrụ na ị na-eme njem a na edemede gị na-eji obi ọmịiko, na-enweghị ịkatọ nke a ma ọ bụ omenala ahụ. N'ezie, na Kuala Lumpur nke a dị iche iche bụ otu n'ime ihe ndị na-adọrọ uche m, enwere nnukwu ụdị okpukpe. site na Ndị Kraịst, Islamists, Buddha, ndị Hindu ... Enwere m olileanya na nkwanye ùgwù a ga-aga n'ihu maka ọgbọ na-esote.
Ọ dị mma, oge iji laghachi azụ. Cheta steepụ nke 272 nzọụkwụ!! Ee, na-agbanye aka na shins ọ ka na-ebe ahụ ma oge eruola ịdata.
na post ọzọ m ga-anọgide na-ekwu banyere Malaysia.
Ma dị ka ọnụ ahịa ikpeazụ maka onye ọrụ ụgbọ mmiri nke mbụ na Malaysia nke na-aga ịkwaga n'ime ya ma ọ bụ obodo dị ya nso, m na-ahapụ njikọ Bookaway nke dị mfe ma dị mfe ịtọọ oge njem n'ịntanetị.
Rịba ama, ị nwere ike ịgbanwe asụsụ site na ịpị ọkọlọtọ.
Hụ gị oge ọzọ. (I.e.
Ịmata ntakịrị nke ụwa pịa map ụwa ebe a, nwee obi ụtọ na denye aha na blog ka ị ghara ịga njem ahụ.
Olee otú asia Batu Ọgba ọgba uzo elu igwe Hanuman Ndị Hindu Kuala Lumpur Malia Murugan ụlọ nsọ